Axmed Madoobe oo wali kulamo gaar ah ka wado Xalane | KEYDMEDIA ONLINE
Axmed Madoobe oo wali kulamo gaar ah ka wado Xalane
Safiir dhowr ah oo ugu dambeeyay midka Jabuuti ayaa kulan la yeeshay Axmed Madoobe.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xarunta Xalane ka wado kulamo xiriir ah oo uu la yeelanayo Musharixiinta iyo safiirro ajnabi ah oo kala hadlayo arrimaha doorashadda iyo abaarta Gedo.
Kulankii ugu dambeeyay wuxuu la yeeshay safiirka Jabuuti ee Soomaaliya Aadan Xasan oo ay kawada hadleen khilaafka doorashadda Soomaaliya iyo sidii la isagu tanaasuli lahaa dhinacyadda kala aragtida duwan.
"Waxaa booqasho iigu yimid Safiirka Dowlada aan walaalaha nahay ee Jabuuti Danjire Aadan Xasan Aadan, oo aan ka wada hadalay arimaha Doorashada dalka iyo dardar galinta shirka soo socda ee lagaga hadlayo xal u helida ismarin waaga Doorashooyinka," ayuu yiri Axmed Madoobe.
Hogaamiyaha Jubbaland ayaa mudo maalmo ah ku sugan Muqdisho, waxaana la dejiyay Xalane oo amaankiisa ajnabi ku aaminay, isagoo diiday inuu tago Villa Somalia maadaama khilaaf kala dhaxeeyo Farmaajo oo ay isku hayaan Gedo.
Deni, ayaa sidoo kale Xalane la dejiyay shalay waxaana labadan hogaamiye oo isbahaystay ay doonayaan in loola dhaqmo si ka duwan madaxda kale ee maamullada dalka ka jira.